Calvinism နှင့် Arminianism အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ➡️
Calvinism နှင့် Arminianism အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ Calvinism နှင့် Arminianism တို့သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွင်း၌ထင်မြင်ယူဆချက်နှစ်ခုဖြစ်သည် ကယ်တင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင့်အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတို့အကြားဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားပါ။ The Calvinism ဘုရားသခင်နှင့်အချုပ်အခြာအာဏာကိုပိုမိုအလေးပေးသည် arminianism ၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက နှစ်ခုစလုံးအကြောင်း ပြောထားတယ်။
2 Calvinism နှင့် Arminianism အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Calvinism နှင့် Arminianism တစ်ချိန်တည်းမှာထလာတယ်မရ။ Calvinism သည်အမည်ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး ၏စိတ်ကူးများကိုအခြေခံသည် John Calvin Arminianism သည်အတွေးအခေါ်များကိုအခြေခံသည် ယာကုပ် Arminiusမရ။ ဤလူနှစ် ဦး ၏နောက်လိုက်များသည်သူတို့၏ရပ်တည်ချက်များကွဲပြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ (နှင့်) ပဋိပက္ခများရှိသည်။
Calvinism လူကြိုက်များလာသောအခါ Arminianism ၏နောက်လိုက်များသည် Calvinists များနှင့်သဘောမတူသောအချက်အချို့အကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ ဒါတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ရာစုနှစ်အချို့ကြာမြင့်ခဲ့သောကြီးမားသောငြင်းခုံမှုတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။
Calvinism နှင့် Arminianism အကြားအဓိကကွာခြားချက်သည် ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ဘယ်လိုမရ။ Calvinism ကငါတို့ကအဲဒါကိုမဲမပေးဘူးလို့ပြောတယ်။ Arminianism ကငါတို့ရွေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။
ကယ်လ်ဗင်ဝါဒ အဲဒါကို သင်ပေးပါ။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို အုပ်စိုးတော်မူ၏။မရ။ ထို့ကြောင့် သူသည် ကယ်တင်လိုသူကို ရွေးသည်။ ငါတို့အားလုံးအပြစ်ရဲ့ဘ ၀ မှာနစ်မွန်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒနဲ့မကယ်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် ယုံကြည်ခြင်းအချို့ကို ပေးသည်။ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းကိုမဆီးတားနိုင်။ အားလုံးကိုမဖြစ်မနေကယ်တင်လိမ့်မည်။
"ငါတို့သည်ဤကမ္ဘာမတည်မဖြစ်မီ၌ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည်ရှေ့တော်၌သန့်ရှင်း။ အပြစ်မတင်ဘဲနေရမည်အကြောင်း၊
1ဖက် ၅း၂၅-၂၆
Arminianism ဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုလက်ခံခြင်းနှင့်မည်သူမျှသူ၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပမ်းမှုများဖြင့်သူ့ကိုယ်သူမကယ်တင်နိုင်ဟူသောအချက်ကိုလက်ခံပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အခမဲ့ ကယ်တင်ခြင်းသာမက၊ လူတစ်ဦးစီကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါ။. မည်သူ့ကိုမျှယုံကြည်ရန်နှင့်ကယ်တင်ရန်တာဝန်မရှိပါ။
အခြားခြားနားချက်မှာ ယေရှုသည် ကယ်တင်ရန် ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိ ကယ်လ်ဗင်ဘာသာတရားကယေရှုသည်ရွေးကောက်ခံသူများကိုကယ်တင်ရန်သာအသေခံတော်မူသည်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဟိ Arminianism ကယေရှုသည်လူသားအားလုံးအတွက်အသေခံခဲ့သည်ဟုသွန်သင်သည်ယုံကြည်သောသူတို့သာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
သို့သော်အများစု ကယ်လ်ဗင်ဝါဒီများသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ “ရုပ်သေးရုပ်များ” ဖြစ်သည်ဟု မယုံကြည်ကြပေ။မရ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်သော အခွင့်အာဏာရှိကြောင်း ၎င်းတို့က လက်ခံသော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မဟုတ်ပါ။ ဟိရီ၏နောက်လိုက်အများစုသည် Arminianism သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အကျင့်များ (သို့) ကောင်းမှုများဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုမယုံကြည်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်အားလုံးဖြစ်သည်ကိုသူတို့လက်ခံကြသည်။ ရိုးရှင်းစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကယ်တင်ခြင်းကိုငြင်းပယ်နိုင်သောစွမ်းအားရှိသည်။
Calvinists နှင့် Arminianism ကိုထောက်ခံသူများထဲတွင်လည်းတစ်ခုရှိသည်။ ယုံကြည်သူတစ် ဦး သည်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးရန်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုသည်ကိုဆွေးနွေးသည်။ The Calvinism ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မရ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Arminianism ကဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းသေချာမှုမရှိချေ။
ဒီမေးခွန်းအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေမရှိပါဘူး။ သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်သည်အရာခပ်သိမ်းကိုအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လည်းလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လူတွေကဘုရားသခင်အလိုမရှိတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ကြတယ်။
ကယ်တင်ခြင်းမေးခွန်းသည်ကြက်သားနှင့်ကြက်ဥ၏မေးခွန်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ဘယ်ဟာကအရင်လာတာလဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော် ဒါမှမဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းလား။ သမ္မာကျမ်းစာက မတုံ့ပြန်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် အချိန်၊ ရှေ့နှင့်နောက် စည်းမျဉ်းများကို ကန့်သတ်မထားပေ။ ၎င်းသည်ထာ ၀ ရဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်၊ ရှေ့သို့၊ အချိန်မရွေးသွားနိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလောကဓံနဲ့ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတာကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလား။
သမ္မာကျမ်းစာကဆိုသည် ဘုရားသခင်သည်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားသည်မရ။ သို့သော်သူ၏အချုပ်အခြာအာဏာ၌ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်စေတယ်။မရ။ ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ကမ်းလှမ်းသောကယ်တင်ခြင်းကိုမငြင်းရန်သတိပေးသည်၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်ကြောင်းစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုလည်းအာမခံသည်။
Es တစ်ဘက်ကမှန်တယ်လို့ကြေညာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး, အဘယ်ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာကရှင်းမပြဘူးမရ။ ဥပမာ၊ ယောဟန် ၃:၁၆, ယေရှုသည်ယုံကြည်သောရွေးကောက်ခံသူများအတွက်သာယေရှုသေဆုံးခဲ့သည်ကိုသက်သေပြရန်၎င်း၊ ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုကျမ်းပိုဒ်တွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုထားသည်။ ဤအသေးစိတ်မျိုးကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ကံမကောင်းစွာဘဲ၊ ယုံကြည်ချက်ရှိပုံရသူတစ် ဦး သည်ယေရှုကိုစွန့်လွှတ်တတ်သည်။ Calvinism အရဤပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည် စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိခဲ့ဘူးထို့ကြောင့် အမှန်တကယ် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ Arminianism အရ၊ ဤသည်မှာ သက်သေဖြစ်နိုင်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးနိုင်သည် လူတစ် ဦး သည်ယေရှုအားအမှန်တကယ်ငြင်းပယ်လိုလျှင်
လူအချို့ကယေရှုကိုကြိုးစားသော်လည်းသမ္မာကျမ်းစာကပြောပါသည်မရ။ ဒါပေမယ့်ဒီလူတွေကယ်တင်ခံရမလား၊ မကယ်ဘူးဆိုတာမပြောပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ အမှန်တကယ်တွက်ချက်ရမည့်အရာသည်ထာဝရဖြစ်သည်။
သူတို့သည် ပြန်၍ နေကြ၏၊ နောင်တသို့တဖန်အသစ် ပြန်၍၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်အတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေသတ်ခြင်းကို၎င်း၊ ဝေဖန်မှု
ဒါ ဖြစ်ပြီ! ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ calvinism နဲ့ arminianism ဘာကွာသလဲမရ။ အခုမင်းသိချင်ရင် ကက်သလစ်နှင့်ပရိုတက်စတင့်တို့၏အဓိကကွာခြားချက်များကားအဘယ်နည်း, ဆက်လက် browsing Discover.Online